Sawiro: Mala Socotaa Inay Jiraan 6-Cudur Oo Aad Ka Qaadi Kartid Shumiska Aad Sameysid - Hablaha Media Network
Sawiro: Mala Socotaa Inay Jiraan 6-Cudur Oo Aad Ka Qaadi Kartid Shumiska Aad Sameysid
HMN:- Inta badan marka lasoo hadal qaado ama laga fikiro shumis labo qof wadaagayaan dabcan halista cudur ka dhaln karo lagama fikiro ee dareenka uu shumiska xambaarsan yahay ayaa ka weyn.
Waxaan eegi doonaa 6-cudur oo ka dhalan karo marka aad u shumis sameysid kuwaas oo aan inta badan lagu baraarugsaneyn:
Influenza: waa cudurka dureyda ama hargabka si toos ah ayaa loo kala qaadi karaa markii qof hargab haayo uu shumis la wadaago qof xanuunka qabin.
Sida caadiga ah Virus-ka hargabka sido sedex nuuc ayuu kugu soo gaari karaa: Shumis, qufuc iyo hindhiso kadibna waxaa kugu dhacaayo madax xanuun, murqo xanuun, cunnaha oo ku xanuuno iyo xubad daran mararka qaar.
Herpes: Qofka oo afka nabro bacoolo ah ku yeesho, waxaana sababo inaad shumisid qof faruuryaha ku sito Virus-ka nabraha faruuryaha sabo oo aan bislaanin sidaasna adiga kuugu gudbaan.
Syphilis: Waraaboow ama isfiilito ayaa laga qaadi karaa shumisyada qaar, hadii qofka aad shumineyso carabkiisa ama furuuryihiisa gudaha nabro qarsoon ama muuqdaan leeyahay.
Meningitis: Qoorgooye cudurka la dhaho ayaa laga qaadi karaa shumiska waxaana kugu dhacaayo qoorta oo ku adkaato, xumad ama qando xoogan oo ku qabato iyo madaxa uu ku xanuuno.
Respiratory viruses: waxaa kugu dhacaayo hargab/duray, jadeeco iyo cuduro kale oo neef mareenka kaaga dhacaayo, waana qasab qof xanuunadaas qabo inuu kuu gudbinaayo marka aad shumis la wadaagtid.
Gum diseases: cudurka ciridka ku dhaco ayaa ku haleelayo hadii aad shumis la wadaagtid inkastoo si toos ah uusan kuugu dhaceyn hadana bakteeriyada cudurkaan ayaa afkaaga ka dhigeyso mid aad lasoo dhaweysin karin weyna ku dhibsanayaan saaxiibadaada shiirka afkaaga.
Tooth Decay: aadbay u sareysaa fursada kuugu dhici karo ilkaha bololaan hadii aad shumis la wadaagtid qof horey ilkihadiisa u bololeen madaama bakteeriyada shumiska si sahlan la isugu gudbin karo.